I. Izinzuzo zendwangu ye-polyester: 1. Indwangu ye-polyester inamandla amakhulu. Amandla we-fiber okuyisisekelo yi-2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, futhi amandla we-fiber enamandla amakhulu yi-5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Ngenxa yempahla yayo ephansi ye-hygroscopic, amandla ayo amanzi namandla omile ngokufanayo ngokufanayo. Umthelela wayo ...
Yiziphi izici zendwangu ye-polyester taffeta
UTaffeta ubizwa nangokuthi i-polyester taffeta, iyindwangu ejwayelekile kakhulu empilweni, kepha ngaphezu kwabantu abangochwepheshe, abantu abavamile ekuqondeni kwakhe akucaci, ngakho-ke siqonda izici ze-polyester taffeta. Indwangu ye-taffeta Polyester taffeta yezindwangu: I-Polyest ...
I-Hangzhou DRO Textile- Umphakeli wezindwangu zangaphandle
I-Hangzhou DRO Textile Co., Ltd. iyindwangu yendwangu yendwangu, izindwangu ze-polyester, indwangu ye-Oxford yendwangu, izindwangu zezindwangu, indwangu edayiwe, indwangu ye-acrylic, izindwangu ze-taffeta, izindwangu zokuphotha iziponji, indwangu edayiwe kanye neminye imikhiqizo yobungcweti ukukhiqiza nokucubungula inkampani, co yethu ...